Mombamomba ny orinasa - WEITAI
Weitai Hydraul dia iray amin'ireo mpamatsy hydraulic any Shina, ny orinasa hydraulic tany am-boalohany izay manam-pahaizana manokana amin'ny asa fanondranana mandritra ny am-polony taona maro. Manolo-tena izahay amin'ny fanomezana vokatra sy serivisy hydraulic tsara ho an'ny orinasa sy ny mpampiasa farany manerantany.
Tamin'ny voalohany dia orinasa OEM izahay, ary nivoatra tsikelikely ho lasa orinasa komprehensif mampifangaro ny famokarana, ny varotra ary ny fampiasam-bola. Ny motera mandeha amin'ny rivotra dia iray amin'ireo vokatra lehibe eto aminay. Ho fanampin'ny ozinina hydraulic manokana, dia tompon'antoka mpamokatra maotera avo lenta izahay. Ny orinasan-tsika dia voamarina ISO ary ny mpamatsy fitaovana dia samy nahazo mari-pahaizana CE, RoHS, CSA ary UL. Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra arakaraka ny sary hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa isan-karazany.
Ny vokatra Motor dia misy fa tsy voafetra amin'ny motera fitsangatsanganana, motera swing ary motera mandeha amin'ny kodiarana. Ny motera misy antsika dia manana firafitra mandroso sy manome fahombiazana avo lenta, tanjaka avo ary fitoniana tsara izay ambony lavitra noho ny motera mpifaninana aminay. Izany dia nahatonga ny fangatahana sy ny famokarana motera fitsangantsanganana mahery 40,000 Weitai tamin'ny taona 2019. Ny motera fitsangatsanganana Weitai dia tafiditra ao anatin'ny tsipika famokarana ho an'ireo mpanamboatra excavator toa an'i SANY, XCMG ary SDLG.
Amin'ny maha-sekretera an'ny Sekretera Shandong Hydraulika Association (SDHA) sy ny sehatra fanondranana ankapobeny ny fikambanana hydraulic hydraulic, Weitai dia mirehareha amin'ny fisolo tena an'i Shina ary mizara ny vokatra hydraulic avo lenta amin'izao tontolo izao. Weitai Hydraul dia efa voafidy ho orinasa miavaka isan-taona 2018 amin'ny fihaonambe isan-taona sy ny Forum momba ny famokarana intelektualin'ny Fikambanan'ny Manamboatra Equipment Shandong, ary ezahinay ny hampiorina hatrany an'io fahombiazana io.